Antony sy ny fomba hisorohana ny alikanao tsy hanaikitra ny fandriana | Tontolo alika
Manaikitra ny fandriany ny alikako, mahatonga ary ahoana ny fomba hisorohana an'io
Mahita ny alikanao manaikitra ny fandriany ve ianao? Matetika ny alikantsika dia mazàna manaikitra ny zavatra rehetra amin'ny lalany ary anisan'ireo zavatra hitan'izy ireo ny fandriany.
Ny zavatra anontaniantsika ny tenantsika rehefa mahita ny alikantsika manao an'io dia nahoana no mitranga izany? Raha te hahalala ianao ny fomba hamahana ity olan'ny fiompinao ity, tokony hamaky ity lahatsoratra manaraka ity ianao, izay hanampianay anao hahafantatra ny antony anaovany azy sy ny fomba tsy hanaovany azy intsony.
1 Ahoana ny fomba fihetsika manoloana an'io fihetsika alika io?
2 Fa maninona ny alika no manaikitra zavatra?
2.1 Tsy nampianatra azy ianao
2.2 Lazao izay mahasosotra anao
2.4 Miandry anao fatratra
2.6 Tsy mampiasa angovo ampy ianao
3 Ahoana ny fomba hampijanonako ny alika tsy hitsako ao am-pandrianao?
3.1 Ny fampiasana ny fandriana ihany no eo imasonao
3.2 Makà teatra
3.3 Fandriana tsy vaky
3.4 Manantona mpampianatra iray
Ahoana ny fomba fihetsika manoloana an'io fihetsika alika io?
Tonga any an-trano ianao rehefa avy niasa iray andro ary nahita sombin-farafaran'ny alikao rehefa namaky ny varavarana ianao. Tonga eo amin'ny toerana misy ny fandriany ianao, ary eo izy manaikitra ilay ampahany navela ho simba. Ny zavatra voalohany anontanianao ny tenanao amin'ity toe-javatra manokana ity dia, inona no tokony hataoko raha ny alikako no manao an'io?
Ny fihetsikao manoloana an'io fihetsika hafahafa alika io dia zava-dehibe. Azo antoka fa ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao dia ny fanasaziana na ny fanamelohana azy, fa tsy zavatra izay mampisy fahasamihafana eo amin'ny alikao izany, izay azo antoka fa tsy hahatakatra fa mamaly mafy ianao.
Ny zavatra azo inoana indrindra raha manafay ny alikao ianao dia izao manana fihetsika mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra tianao ho tratrarina ary avereno averimberina hatrany. Izany no antony mahatonga ny zavatra tsara indrindra, fa tsy hihetsika amin'ny fotoana nitrangan'izany, dia ny hamerina hijery ny antony fihetsiky ny biby fiompinao, mba hamahana ny olana eny ifotony.
Fa maninona ny alika no manaikitra zavatra?
Ity fihetsika manokana ity dia tsy miseho tampoka amin'ny alika tsy misy antony. Betsaka ny antony tsy ahitany ny tsy tokony hitsakoana zavatra sasany, ao anatin'izany ny fandriany. Avy eo, hampianatra anao ny antony mahazatra indrindra izahay hanaikitra ny zava-drehetra alehany ny biby fiompinao:
Tsy nampianatra azy ianao
Ny alika dia tsy teraka nahalala izay azony atao sy tsy azony atao ao an-tranonao ary gaga isika matetika amin'ny fitondran-tena amin'ity karazana ity, raha ny marina dia mila manontany tena isika raha nanome azy ireo ny fahalalana ilaina, mba tsy hanatanterahan'izy ireo ireo karazana hetsika manimba. Anisan'ny mety misy dia ny fiheveran'ny alika fa lalao ity.
Lazao izay mahasosotra anao
Raha toa ianao ka manasazy azy noho ny zavatra hafa na efa tsy nolazaina azy tamim-pitaka noho ny fihetsika hafahafa izy, afaka alefa io fahatsapana fahasosorana io ny alikanao Amin'ity fihetsika mikorontana ity dia manomboka manaikitra amin'ny unusilles ianao, na sofa, ary na dia ny fandrianao aza. Mahagaga fa ity zavatra ataony ity ary manelingelina anao fatratra dia mampitony azy amin'ny fahatsapana fahasosorana niainany.
Mifantoka manokana amin'ny alika kely, dia tokony ho fantatrao fa miaina zava-baovao isak'izay ary izy ireo mety miovaova ny fihetsik'izy ireo ary mety mihetsika amin'ny fomba samihafa izy ireo, mieritreritra fa lalao ny zava-drehetra. Fa tokony ho fantatrao ihany koa fa toy ny mahazo antsika zaza, ny nifiny dia mitombo miadana ary izany dia mety hiteraka fanaintainana azy ireo.
Miandry anao fatratra
Ny alikanao dia mahafantatra ny fihetsika rehetra ataonao. Efa zatra mahita anao tonga sy mandeha izy, miandry safosafo, hamenoinay sakafo na ny milalao amin'izy ireo ny takelak'izy ireo. Ny fotoana handehanana miasa sy ny alikao irery mandritra ny ora vitsivitsy dia mampiditra azy ao anaty famoizam-po amin'ny tsy fahitana anao mandritra izany fotoana izany, izay mety hiteraka fanahiana ary mila mamoaka izany amin'ny alàlan'ity fihetsika manaikitra ny zava-drehetra ity.
Ny zavatra misy ifandraisany amin'ny teboka teo aloha dia ny fahasosoran'ny alika, zavatra mety hitarika an'ity karazana voina ity sy ny hafa ratsy kokoa. Mila famporisihana tsy tapaka ny biby fiompinao mba tsy hahatsapa ho mankaleo mandritra ny fotoana maharitra. Raha tsy misy na inona na inona manodidina anao manentana anao ampy dia ho hitanao izany antony manosika amin'ny fampiasana ny valanoranonao sy nify handroahana ny fandriana na ny ondana eo akaiky eo.
Tsy mampiasa angovo ampy ianao
Misy karazana tony kokoa mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena, fa ny hafa kosa tena mila mamoaka ny heriny rehetra, izay maro. Misy karazan'alika alika mialoha hitrandrahanatoa azy Borzoi, ary ny hafa izay mila mihazakazaka sy mihazakazaka nefa tsy mijanona mandritra ny fotoana maharitra, mba handany herinaratra ampy hahatongavany any an-trano ho reraka amin'izay mba hitondra tena tsara ao an-tranony.
Ahoana ny fomba hampijanonako ny alika tsy hitsako ao am-pandrianao?
Efa nojerentsika daholo ny antony mahatonga ny alikanao tsara tarehy ho lasa "bibidiaManaikitra ny zava-drehetra ao an-tranonao izany. Fotoana izao hahafantarana izany ary hieritreretana izay mety ho vahaolana voalaza mba tsy hanaovanao azy intsony. Misy safidy samihafa azonao andramana mandra-pahatongan'ny alikanao tsy mampiseho izany fihetsika izany intsony ary ireto avy ireto:
Ny fampiasana ny fandriana ihany no eo imasonao
Ny iray amin'ireo vahaolana mahazatra hitanay momba an'io olana io dia, rehefa lasa ianao dia esorinao ny fandriana ampiasain'ny alikanao ary mirona hanaikitra, ka rehefa eo ianao sy eo ambany fanaraha-masonao no ampiasainy. Araka ny efa nolazainay taminao, ny fibedy azy tsy ho azon'ny tanana dia tsy hitondra vokany tsara, ka rehefa mahita azy manaikitra ny fandriany ianao dia tsy maintsy ajanonao izy ary omenao haingana zavatra iray azony manaikitra, toy ny iray amin'ireo kilalaony.
Zavatra hita ao amin'ireo magazay biby fiompy rehetra alehanao matetika dia biters. Ny alikanao dia tsy hitsahatra te-hitsako zavatra, noho izany dia mila manaikitra ny zavatra mety fotsiny ianao, ka tsy manaikitra ireo zavatra vaky. Ireo teetera ireo dia matetika vita amin'ny lamba mahazaka ary miaraka amin'izany ny alikanao dia hamoaka ny fihenjanana rehetra ilainy hamotsorana ary hamela irery ny fandriany.
Fandriana tsy vaky
Misy fandriana tsy zakan'ny alikako va ny nifiny? Ny valiny dia eny, ary ho azonao any amin'ny fivarotana biby fiompy namana koa izy ireo. Ireo dia vita amin'ny fitaovana mahatohitra kokoa izay hamela ny alikao hanala ny filana manaikitra nefa tsy miteraka olana.
Manantona mpampianatra iray
Raha toa ka tsy nahitam-bokatra ireo voalaza etsy ambony ireo dia tsara kokoa ny manatona mpampianatra iray ary anontanio hoe ahoana ampianaro izy tsy hanaikitra.
Ireto daholo ireo torohevitra azonay omena anao mba tsy hanaikitra intsony ny alikanao Ny fandrianao. Tadidio foana fa ny fifandraisanao bebe kokoa amin'ny biby fiompinao dia hahatonga anao hahatakatra tsara kokoa azy ary hahavita fitondrantena tsara ho an'ny fiaraha-miaina tsaratsara kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Manaikitra ny fandriany ny alikako, mahatonga ary ahoana ny fomba hisorohana an'io
Yorkie poo na yorkipoo
Sinema ho an'ny alika dia zava-misy